१५ दिनसम्म मनाईनेे महान पर्व विजयादशमी पर्व घटस्थापनासँगै सुरु भईसकेको छ भने पूणिर्माको दिन यसको बिधिवत रुपमा अन्त्य हुन्छ । यसमध्ये पनि दशैंको पहिलो १० दिनको महत्व एकदमै धेरै रहेको छ । प्राचीनकालदेखि मनाईँदै आएको यो दशैंको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक लगायत यावत महत्व रहेको छ ।
नव दुर्गाको पूजा र त्यसको अर्थ
दशैंको पहिलो दिन सुख-समृद्धि र ऐश्वर्यको प्रतीक मानिने कलश स्थापना गरेर घटस्थापना गरिन्छ । घटलाई सुख-समृद्धि र ऐश्वर्यदायक तथा मंगलकारी मान्ने गरिएको छ । यहीदिन घटको पूजा गर्नुले घरको सबै विपददायक तरंगहरु नष्ट भएर सुख शान्ति र समृद्धि आउने धार्मिक विश्वास छ । दशैंको पहिलो दिन हामी दुर्गाको शैलपुत्री स्वरुपको पूजा गर्ने गर्दछौं ।
दशैंको वैज्ञानिक पक्ष
दशैंमा नवदुर्गाको पूजा गर्नुकोपछि प्रतीकात्मक एवं वैज्ञानिक महत्व पनि कम छैन । दशैंमा लगाउने टीकाको वैज्ञानिक पक्ष, बलिको बैज्ञानिक पक्ष, जमराको महत्व आदि पनि रहेका हुन्छन् । हामीले दशैंमा राख्ने जमरालाई सांस्कृतिक दृष्टिले दीर्घायूको प्रतीक मानिन्छ । तर, जमराको वैज्ञानिकता खोज्दा बिहान शारीरिक व्यायाम गरेपछि जौं र गहुँको जमराबाट बनेको जुस पिउँने हो भने रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ र धेरै रोगको निको समेत हुने कुरा वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि समेत भईसकेको छ ।
दशैंको ऐतिहासिक पक्ष
अर्काे तर्फ दशैंको ऐतिहासिक महत्व पनि उस्तै छ । ऐतिहासिक रुपमा यो पर्व यही मितिदेखि सुरु भयो भनेर त अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । तर, यो आजभन्दा ६ हजार वर्ष पहिलेदेखि नै सुरु भएको अनुमान गरिएको छ ।
यो पर्वमा निकै आर्थिक चहलपहल हुने भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसको महत्व निकै रहेको मान्न सकिन्छ ।
२०७८ आश्विन १८, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 77 Views
५.	म्युजिक भिडियो छायाँकन लागि कलाकार बोकेको गाडी दुर्घटनामा एकको मृ’त्यु, आधा दर्जन घाइते
६.	मानव खप्पर र हड्डीको तस्करी